March 2, 2020 - CeleLove
တစ်နေ့မှာ မိနစ် ၂၀ တရားထိုင်ရင် ရလာမယ့် အံ့မခန်းအကျိုးကျေးဇူးများ…
တစ်နေ့မှာ မိနစ် ၂၀ တရားထိုင်ရင် ရလာမယ့် အံ့မခန်းအကျိုးကျေးဇူးများ… စိတ်တွေ အရမ်းပင်ပန်းလို့ ရင်ဖွင့်တဲ့အခါ အတော်များများက ပြောကြတာ ရှိပါတယ်။ တရားထိုင်ကြည့်ပါလားတဲ့။ ဟုတ်ပါတယ် တရားထိုင်ခြင်းက လူတွေကို ကောင်းကျိုးပေးတာကြောင့် အခုလို ပြောဆိုကြတာပါ။ တစ်နေ့တစ်နေ့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေတဲ့ နေ့ရက်တွေကို ဖြတ်သန်းနေရတယ်လို့ ခံစားရရင်တော့ တရားထိုင်ကြည့်တဲ့အခါ […]
ဘာကြောင့် လူတစ်ယောက်ကိုပိုချစ်လာလေ ရှောင်ဖယ်ဖို့ကြိုးစားလေ ဖြစ်ကြရတာလဲ
ဘာကြောင့် လူတစ်ယောက်ကိုပိုချစ်လာလေ ရှောင်ဖယ်ဖို့ကြိုးစားလေ ဖြစ်ကြရတာလဲ သင်ဟာလူတစ်ယောက်ကိုချစ်မိတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် ရယူဖို့ထက် စွန့်လွှတ်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် ရှေ့ဆက်မတိုးဖို့ကိုသာ စဉ်းစားမိတတ်တဲ့သူလား။ သင်တစ်ယောက်တည်းဒီလိုခံစားနေရတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတော်တော်များများဟာလည်း အလားတူပဲ ခံစားရတတ်ကြပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီလိုမျိုးခံစားမိနေရတာလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းလေးတွေကိုတော့ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါအုံး …။ (၁) အတိတ်ဆိုးတွေ သင့်မှာအချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး မကောင်းတဲ့ အတိတ်တွေရှိနေခဲ့လို့ပါ။ […]
စိတ်ထားဖြူစင်ပြီး ခံစားလွယ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေဆိုတာ ဒီလိုပါ…
စိတ်ထားဖြူစင်ပြီး ခံစားလွယ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေဆိုတာ ဒီလိုပါ… မိန်းကလေးတွေထဲမှာ အရမ်းကိုစိတ်ထားဖြူစင်ပြီး ခံစားလွယ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေရှိပါတယ်။ တစ်ခါတလေ သူတို့ရဲ့ ဖြူစင်မှုဟာ အများအမြင်မှာ တစ်မျိုးဖြစ်သွားတဲ့အခါတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ထားဖြူစင်ပြီး ခံစားလွယ်တဲ့ မိန်းကလေးမျိုးဟာ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကို ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်နော် …။ (၁) လူတွေကို အရမ်းဂရုစိုက်တယ် […]
ခြင်မလာအောင်ပြောလို့စမ်းတာ တကယ်ဟုတ်နေတယ်…သိတာတောင်နောက်ကျနေတာ စပါးလင်ကို ဒီလိုလေးထားလိုက်တာ ခြင်တစ်ကောင်မှ မရှိတော့ပါ…. သိတာတောင်နောက်ကျနေတာ…. မီကာဇာ (မာကျူရီ)ဟိုတယ် ရေကူးကန်ဘေးမှာ စိုက်ထားတာတွေ့လို့မေးကြည့်တာ… ခြင်မလာအောင်လို့ပြောလို့စမ်းတာ တကယ်ဟုတ်နေတယ်…. ကျွန်တော်ဆေးဆရာ တယောက် မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ …. အားလုံးကို ကျန်းမာစေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ တွေ့သမျှဆေးနည်းတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် … ။ orginal […]
စာမေးပွဲဖြေဆိုကြတော့မည့် ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားလေးများအတွက် အောင်ပွဲဝင်ယတြာ
စာမေးပွဲဖြေဆိုကြတော့မည့် ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားလေးများအတွက် အောင်ပွဲဝင်ယတြာ အောင်ပွဲဝင်ယတြာ(စာမေးပွဲဖြေဆိုကြတော့မည့် ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားလေးများအတွက်) “ဇမ္ဗူဒီပါလက်ယာတောင်ကျွန်း သြဘာနိမိတ်ထွန်း” ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်ရာအရပ်သည် တောင်ကျွန်းဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ဤတောင်ကျွန်းတွင်နေထိုင်နေကြသူများအတွက် နိမိတ်သည် လွန်စွာအရေးကြီးကြောင်းကို ရှေးပညာရှိကြီးများက အထက်ပါစကားဖြင့် သတိပေးထားခဲ့ကြလေ၏။ “ရှေးထုံးလည်းမပယ်နဲ့ဈေးသုံးလည်းမလွယ်နဲ့”ဟူသော ဆိုရိုးစကားအတိုင်းပင် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ရှေးထုံးကိုပစ်ပယ်၍ မရစကောင်းပေ။ထို့ကြောင့်လည်း ကျွန်ုပ်တိုိ့မြန်မာလူမျိုးများသည် နိမိတ်ကို အလေးအနက်ယုံကြည်ကြလေ၏။အ လေးထားကြလေ၏။ […]
အိမ်ထောင်ရေး သာယာစေဖို့ အတွက် ရှောင်ရှားရမည့် အချက်များ
အိမ်ထောင်ရေး သာယာစေဖို့ အတွက် ရှောင်ရှားရမည့် အချက်များ (1) လူရှေ့သူရှေ့ မရှောင် အိမ်ထောက်ဘက်ကို အပြစ်တင်ခြင်း… လင်နဲ့မယား လျှာနဲ့သွားပါ။ အိမ်ထောင်သက် ရလာတာနဲ့ အမျှ အထစ်အငေါ့လေးတော့ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ လူရှေ့သူရှေ့ မရှောင် တဘက်သားကို အပြစ်တင် ရန်ထောင်ရင်တော့ ရန်ပွဲ ဖြစ်လာမှာပါ။ အဲလိုရန်ဖြစ်တာ […]
ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးလေးတွေရဲ့ သဘောသဘာဝနဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားများ
ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးလေးတွေရဲ့ သဘောသဘာဝနဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားများ လူတွေမှာ သူနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့အကျင့်တွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ မွေးနေ့မွေးနံကို လိုက်ပြီး လူတစ်ယောက်အကြောင်းကို သိရတာမျိုးလည်း ယုံကြည်မှုတွေအရ ရှိပါတယ် … ။ သင်ရဲ့ မွေးဖွားတဲ့ ရက်ကို လိုက်ပြီး သင့်ရဲ့ ယေဘုယျ အကျင့်ကိုလည်း […]
အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ မြွေ အစာ မစားလို့ ဆရာဝန်နဲ့ သွားပြတော့မှ အဖြစ်မှန်သိရ
အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ မြွေ အစာ မစားလို့ ဆရာဝန်နဲ့ သွားပြတော့မှ အဖြစ်မှန်သိရ သက်လတ်ပိုင်း အရွယ် အိန္ဒိယအမျိုး အသမီးကြီး တဦးက စပါးကြီးမြွေ တကောင်ကို အိမ်မွေး တိရိစ္ဆာန်အဖြစ် မွေးထားပါတယ် ။ ၄ မီတာ ရှည်တဲ့ ထိုမြွေကြီးက တနေ့မှာတော့ လုံးဝ အစာ […]
ကောင်လေးတွေက ချစ်သူကောင်မလေးတွေကို ဒါတွေကြောင့် သဝန် တိုတတ်ပါတယ်
ကောင်လေးတွေက ချစ်သူကောင်မလေးတွေကို ဒါတွေကြောင့် သဝန် တိုတတ်ပါတယ် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အကြောင်းပါပြီး ချစ်သူတွေ ဖြစ်ကြတဲ့အခါ အပြန်အလှန်နားလည်ဖို့ကြိုးစားရင်း ယုံကြည်မှုတွေ တည်ဆောက်ကြပေမယ့် မကောင်းတာတွေ မဖြစ်စေချင်တဲ့အတွက် စိတ်ပူတာ၊ သဝန်တိုတာ၊ စိုးရိမ်တာ စတဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေက သူ့အလိုလို ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ယောကျာ်လေးတွေက သူတို့ရဲ့ကောင်မလေးတွေကို ချစ်မိတာအခါမှာ […]